Halista Ba’an ee Muqdishooyinka 2020 -News and information about Somalia
Home Warkii Halista Ba’an ee Muqdishooyinka 2020
Qormadaan Waxaa qoray Yusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii Arrimaha dibadda iyo Suxufi ruug caaddaa ah. Yusuf waxay qoramdiisa ku bilaabaneysaa:
“Maaddaama xannibaadda magaalada dul saaran oo marba marka ka dambeysa ka soo dareysay ay hadda mareyso heerkii ay ugu liidatay uguna khatarta badnayd waxaa loo baahan yahay laba.
Waxa la yiraahaa marka qof neefta lagu celiyo, wuu illoobaa xuquuqdiisa kale oo dhan. Keliya wuxuu weydiistaa in uu neefsado. Hadda shacabka Muqdisho waxa keliya oo uu codsanayaa waa waddo uu maro in loo furo.
Mas’uulka aan ogeyn inta aan sheegay ama shaki uga jiro, isagu ha soo hubsado. Mas’uulka og ama hadda hubsada ee ku qanca oo sidaa ku raalli ah, ma aqaan wax aan u sheego.Midka aan ku qanacsaneyn, wax ha ka qabto, waxaana hubaal ah in dadweynaha Muqdisho ku-noolka-ah ay qaar badan oo ka mid ahi ay diyaar ula yihiin talo iyo waliba in ay gacan ka geystaan in magaalada laga dhigo mid amniga ilaalisa, lagu noolaado, laguna dhaqmi karo.”
Yusuf Garaad Cumar qormadaan waxaa uu ku qoray bartiisa Facebook-ga uu ku leeyahay Waxaana u soo qaadnay qormada sideeda, annagoon waxba ka jarin kuna darin, kadib markii aan aragnay inay tahay mid muhiim iyo dhab ka haal ah.
Previous articleDHAGEYSO: Kulamo xasaasi ah oo ka bilowday Dh/mareeb
Next articleXubno Shabaab oo la sheegay inay gudaha u soo galeen Dhuusamareeb
Baarlamaanka Puntland oo maanta kulan deg deg ah Ku yeelanaya Garoowe
Raiisal Wasaaraha Itoobiya & Madaxweynaha Masar oo kulan yeeshay, kadib hanjabaadii...
XOG: Cumar Finish oo sharuud adag kuxiray in la heshiiyo wasiir...